I-Apple yethula ama-betas wesithathu we-iOS 14.7, i-watchOS 7.6 ne-macOS 11.5 | Izindaba ze-IPhone
I-Apple ikhipha ama-betas wesithathu we-iOS 14.7, i-watchOS 7.6 ne-macOS 11.5
Yize i-Apple icwiliswe esikhathini sokusebenza kwayo izinhlelo ezintsha zokusebenza okwethulwe eWWDC, kubalulekile futhi ukuqhubeka nokunakekela izibuyekezo zamanje nezinguqulo zemikhiqizo yakho. Eqinisweni, i-Apple isebenza ezinhlokweni ezilandelayo zesoftware etholakalayo njengamanje: iOS 14, watchOS 7 kanye ne-macOS 11. Sibe nama-betas wonjiniyela amasonto ambalwa nemizuzu embalwa edlule kukhishwe ama-betas wesithathu we-iOS 14.7, i-watchOS 7.6 ne-macOS 11.5.
Siyaqhubeka nokubheja kwe-iOS 14.7, i-watchOS 7.6 ne-macOS 11.5
Iqiniso ukuthi izindaba esizitholile kuma-betas okuqala wabathuthukisi balezi zinguqulo ezintsha aziphelele nhlobo. Eqinisweni, ku-iOS 14.7 kuphela izindaba ezihlobene nohlelo lokusebenza lwasekhaya ezitholakele. Kuyo, singakwazi dala izibali sikhathi se-HomePod ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-iPadOS uqobo.
Ukuze ufake lawa ma-betas, idivayisi yakho kufanele ibe nephrofayili yonjiniyela efakwe ngayo ukufinyelela kulolu hlobo lokuqukethwe. Ungabuyekeza i-beta ye-iOS 14.7 owawunayo noma usuka ku-iOS 14.6 uye ku-beta entsha ye-iOS 14.7. Lo mshini unwebeka nge-macOS 11.5 ne-watchOS 7.6.
Ukuhlolwa kwebhethri phakathi kwe-iOS 14.6 ne-iOS 15 beta 1
Akukaziwa ukuthi yiziphi izinhlelo ze-Apple ezihlobene nalezi zinguqulo ezintsha zesoftware yayo. Kodwa-ke, kusobala ukuthi abafuni ukwethula okungaba yisibuyekezo esikhulu sokugcina ku-iPadOS naku-iOS 14, i-watchOS 7 ne-macOS 11 ngaphandle kokuqiniseka ukuthi izindaba ezihlanganisiwe sezilungile. Njengoba kufanele kube nokuzinza kwazo zonke lezi zinguqulo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » I-Apple ikhipha ama-betas wesithathu we-iOS 14.7, i-watchOS 7.6 ne-macOS 11.5
Amahemuhemu amasha akhomba ku-Apple Watch SE 2 entsha kanye nemodeli entsha ye-Explorer
Uhlelo lokusebenza lwezithombe ku-iOS 15 luzosazisa ukuthi izithombe zivela kusiphi isicelo